मनोरन्जन – Page 69 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार ०२:१९ English
‘जेजे हुनु छ हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै’ २२ जेष्ठ २०७०, बुधबार ०२:१४
प्रकाशसँग रेखा २२ जेष्ठ २०७०, बुधबार ०२:१२
फिल्म हात पर्न छाडेपछि माओवादीतर्फ लागेकी उच्छृङ्खल नायिका रेखा थापा मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्न र फाल्न माहिर छिन्। हिरोइन बन्नकै लागि छवि ओझासँग बिहे गरेकी उनले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि श्रीमान्को समेत मतलब गरिनन्। जब देशमा वाईसीएलको शासन थियो, त्यसबेला उपत्यकाका वाईसीएल..
राजेश हमालले गरे दल र नेताको आलोचना १८ जेष्ठ २०७०, शनिबार १५:१६
काठमाडौं, १८ जेठ । राजनीतिक विषयमा हम्मेसी कुनै टिप्पणी नगर्ने अभिनेता राजेश हमालले नेपाली राजनीति र राजनीतिक दलका नेताहरुले बाटो बिराएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेताहरुले जिम्मेवारी बिर्सेर बाटो बिराउँदा देश र जनताले दुःख पाएको उनको भनाई छ । दाङमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच..
बजेट कुम्ल्याउन चलचित्र महोत्सवको तयारी १५ जेष्ठ २०७०, बुधबार ०८:२३
राजन घिमिरे, काठमाडौ, १५ जेठ । महोत्सवको आयोजना किन र कसका लागि गरिन्छ ? जवाफ सहज छ– जुन विषयको महोत्सव गरिन्छ, त्यसप्रति जनचासो बढाउनु महोत्सवको उद्देश्य हुनुपर्छ । अनि त्यसको प्रचारप्रसार हुँदा त्यसको बारेमा सकारात्मक सन्देश जानुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र महोत्सवको सार्थकता..
पदको लोभमा राजनीतिमा लागेको होइन: नायिका रेखा थापा १४ जेष्ठ २०७०, मंगलवार १८:०८
काठमाडौं । एकीकृति नेकपा माओवादीमा औपचारिक रुपमै प्रवेश गरेकी नायिका रेखा थापाले आफू कुनै पनि पदको लोभमा राजनीतिमा नलागेको बताएकी छिन् । फिल्म नेपालसँग कुराकानी गर्दै रेखाले पलायन हुँदा युवा जगत्मा निराशा पैदा हुने हुँदा देशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिमा लागेको बताएकी..
चाल्स शोभराजको विषयमा फिल्म बन्ने १४ जेष्ठ २०७०, मंगलवार १८:०३
काठमाडौं । विकनी किलरको नामबाट चचिर्त कुख्यात अपराधी चाल्स शोभराजको विषयमा फिल्म बन्ने भएको छ। एक अमेरिकी नागरिकको हत्या अभियोगमा नेपालको जेलमा आजीवन कारावासको सजाय भुक्तान गरिरहेका शोभराज अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै ख्याति कमाएका अपराधी हुन्। तर, उनको जीवनीमा आधारित भएर बन्न लागेको..
के सलमान बिहे गर्दैछन् ? ११ जेष्ठ २०७०, शनिबार ०९:१५
एजेन्सी । करिब पाँच दशक उमेरनजिक पुगेका वलिवुड सुपरस्टार सलमान खानको बिबाहको चर्चाले यतिबेला वलिवुड पुनः तातेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा अचानक सलमान खानले बिहे गर्न लागेको समाचार फैलिएको छ, जसअनुसार आफ्नो होम प्रोडक्सनको फिल्म सुटिङका लागि गोवामा रहेका सलमान धेरैजसो समय..
निशाले पनि चुमिन् सगरमाथा शिखर ७ जेष्ठ २०७०, मंगलवार १३:२७
काठमाडौ, ७ जेष्ठ । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, जहाँ उपाय त्यहाँ जाँगर र जहाँ जाँगर त्यहाँ सफलता भन्ने भनाईलाई नेपाली मोडल एवम् चलचित्रकी नायिका निशा अधिकारीले सावित गरिदिएकी छिन् । सगरमाथा चुचुरोमा पाइला टेक्ने प्रथम महिला नायिका बन्न पुगेकी छिन् निशा अधिकारी । मंगलबार बिहान ८ बजे उनले..
केकी ब्रेकअप मुडमा ३ जेष्ठ २०७०, शुक्रबार ०२:१९
काठमाडौं । अधिकांश सिने कलाकारहरुको घरजम र प्रेम सम्बन्ध भत्किरहेको बेला नायिका केकी अधिकारी पनि ब्रेकअपको मुडमा पुगेकी छिन् । तर केकीको मुड कसैसँग प्रेमसम्बन्धमा ब्रेकअप नभई फिल्मबाट ब्रेकअप लिने अवस्थामा पुगेको हो । कम्तीमा पनि ६ महिना नयाँ सिनेमा नखेल्ने मनस्थितिमा छिन्,..
सुष्माको यो कस्तो प्रेम? ३ जेष्ठ २०७०, शुक्रबार ०२:१४
काठमाडौ । सुष्माले राम्रो अभिनय गरिन्। उनकै अभिनयका कारण चलचित्र चलेपछि निर्माताले उनलाई बक्सिसस्वरूप पारिश्रमिक थपिदिए रे भन्नेजस्ता प्रशंसाका कारण होइन कि उनको ब्रेकअप भयो अनि पहिलो प्रेमी छाडेर सुष्मा कार्की अर्कोको खोजीमा छिन् भन्ने गलत खालका समाचारका कारण यतिबेला सुष्मा..
सुष्माले ब्रेकअप पछि समेत सुख पाइनन् ३१ बैशाख २०७०, मंगलवार ०२:२३
काठमाडौं । नायिका सुष्मा कार्कीले ब्वाइप्फ्रेन्डसँगको सम्बन्ध ब्रेकअप गरेपछि समेत सुख पाइनन् । ब्वाइप्फ्रेन्ड नरेन शाहीले ब्रेकअपपछि आफ्नो फेसबुकबाट निजी फोटा सार्वजनिक गरिदिएको सुष्माको आरोप छ । सुष्मा लामो समयदेखि नरेनसँग लिभिङ टुगेदरको सम्बन्ध जोडेकी थिइन् ।..
अब हट र सेक्सीको पालो– सुजता कोइराला, नवनायिका ३१ बैशाख २०७०, मंगलवार ०२:१९
हाल देशभरि प्रदर्शन भइरहेको चलचित्र मञ्जरीमा नायिकाको भूमिका निभाउने नवनायिका हुन्, सुजता कोइराला। धादिङ पुर्ख्यौली घर भई बीरगन्जमा जन्मिएकी कोइरालाले पहिलो फिल्मबाट नै चर्चा कमाएकी छिन्। उनै सुजतासँगको जम्काभेट: तपाईंको नामथर त कांग्रेसको नेतृसँग मिल्दो रहेछ नि? हो। सानैमा..
म अब क्याप्टेन: दिनेश डीसी अध्यक्ष, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज २२ बैशाख २०७०, आईतवार १७:३२
० निर्देशकहरूकै नेता हुनुभएछ, कस्तो लागिरहेको छ? – अवश्य नै राम्रो लागेको छ। निर्देशक भनेको चलचित्रको मस्तिष्क हो। मस्तिष्कको पनि क्याप्टेन हुन पाउँदा खुसी लागेको छ। ठूलो जिम्मेवारी छ, त्यो पूरा गर्नलाई चुनौतीका साथ अगाडि बढेको छु। ० तपाईंहरूको पार्टीगत हो कि स्वतस्फूर्त..
बेरोजगार बनेपछि नायिकाहरु दुःखी २० बैशाख २०७०, शुक्रबार ०२:०३
काठमाडौ । समयलाई चिन्न नसक्दा, समयको मागलाई बुझ्न अनि दर्शकको माग र चाहनाअनुरूप आफूलाई प्रस्तुत गर्न नसक्दा यतिबेला ठूलो सपना बोकेर चलचित्र क्षेत्रमा होमिएका केही नायिकाको अवस्था घर न घाटको भएको छ। यता क्रमशः दर्शकमा नवप्रवेशी हिराइनहरूले छाप छोड्न थालेपछि दश वर्षअघिदेखि..
बेरोजगार बनेपछि नायिकाहरु दुःखी १८ बैशाख २०७०, बुधबार १६:४८
राजन घिमिरे । समयलाई चिन्न नसक्दा, अनि दर्शकको माग र चाहनाअनुरूप आफूलाई प्रस्तुत गर्न नसक्दा ठूलो सपना बोकेर चलचित्र क्षेत्रमा होमिएका केही नायिकाको अवस्था यतिबेला घर न घाटको भएको छ । यता नवप्रवेशी युवतीहरूले दर्शकमा क्रमशः छाप छोड्न थालेपछि दश वर्षअघिदेखि निरन्तर रूपमा सिनेमा..
बेहोसीमै हट सिन दिन्छन्: झरना थापा १४ बैशाख २०७०, शनिबार १८:१९
चलचित्र 'दाइजो'बाट सिनेमा क्षेत्रमा हाम फालेकी नायिका झरना थापाले एक सयभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन् । निर्माता सुनील थापासँग विवाह गरेकीले पनि हुनसक्छ, उनलाई यो क्षेत्रमा टिक्न सजिलो भएको छ । समकालीन नायकसँग मात्रै होइन नव प्रवेशीहरुसँग समेत उनले सिनेमा खेल्ने अवसर पाएकी..